Bit By Bit - လေ့လာခြင်းအပြုအမူ - 2.4.1.2 ကျောင်းသားများကိုအကြားချစ်ကြည်ရေးဖွဲ့စည်းရေး
မြားစှာသောအခြေအနေများတွင်, သုတေသီများသူတို့အလိုအလြောကျတစ်နေရာတည်းတွင်ကောက်ယူချင်သောအရာအားလုံးကိုရှိသည်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းမရှိကြပေ။ နှစ်ဦးဘုံပြဿနာတွေကိုလူအများနှင့်သီအိုရီဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဒေတာများအကြားတစ်ဦးမတိုက်ဆိုင်အကြောင်းမပြည့်စုံသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ကြသည်။ ဒီပြဿနာတွေကိုနှစ်ယောက်စလုံး Kossinets နှင့် Watts အားဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ကြ (2009) ကွန်ရက်များတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဘယ်လိုလူမှုရေးနားလည်သဘောပေါက်ရန်သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်။
1) ရှိပြီးသားဆက်ဆံရေးကို2ဖွဲ့စည်းပုံမှာ) shared လှုပ်ရှားမှုများ (ဥပမာ, အိပ်ဆောင်, သင်တန်းတွေ) နှင့် 3) သူရဲ့လူဦးရေ: အကြမ်းအားဖြင့်စကားပြော, သုတေသီများလူမှုရေးကွန်ယက်ကိုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သုံး features တွေကမောင်းနှင်ကြောင်းထင်တယ်။ ဤသုံးပါးအချက်များအကြား interrelationships နားလည်ခြင်းတစ်ဦးချင်းစီ '' သူရဲ့လူဦးရေနှင့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပေါင်းစပ် longitudinal ကွန်ယက်ကိုဒေတာလိုအပ်သည်။ အစောပိုင်းကလေ့လာမှုများဤအင်္ဂါရပ်အချို့ကိုခဲ့သော်လည်းအဘယ်သူမျှအားလုံးသုံးခဲ့သည်။
Kossinets နှင့် Watts ကြီးမားတဲ့တက္ကသိုလ်ကနေအီးမေးလ်သစ်လုံးလေးလည်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏သုတေသနပြုမှုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ဦးတည်း, ဤအီးမေးလ်ကိုသစ်လုံးမပြည့်စုံခဲ့ကြ, သူတို့ကွန်ယက်ကိုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကားမောင်းအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်အရာအားလုံးကိုမပါဝင်ပါဘူး။ shared လှုပ်ရှားမှုများ (ဥပမာ, ကျောင်းသားနေအိမ်သို့သတင်းအချက်အလက်နှင့်သင်တန်းများအတွက်ကျောင်းအပ်တဲ့ပြီးပြည့်စုံစာရင်း) အကြောင်းကိုတက္ကသိုလ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်အားဖြင့်ကောက်ယူလူဦးရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်: သို့ဖြစ်. , Kossinets နှင့် Watts အချက်အလက်များ၏နှစ်ခုအခြားသတင်းရပ်ကွက်များနှင့်အတူဤအီးမေးလ်ကိုသစ်လုံးပေါင်းစည်း။ မပြည့်စုံခဲ့ချင်းစီ၏အချက်အလက်များ၏ဤသုံးပါးသတင်းရပ်ကွက်များ, ပြီးတာနဲ့ Kossinets နှင့် Watts ကွန်ယက်ကိုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်များအတွက်အစွမ်းထက်ဒေတာဖွဲ့စည်းပုံမှာခဲ့အတူတကွပေါင်းစည်းခဲ့သည်။
ဒါပေမဲ့သူတို့ကျော်လွှားခဲ့ရတအပြီးသတ်စိန်ခေါ်မှုတခုရှိ၏။ Kossinets နှင့် Watts ကဒီတက္ကသိုလ်အတွက်လူမှုကွန်ယက်ဒါကြောင့်သူတို့ပေးသောအချိန်တွင်သူအဖို့ချိတ်ဆက်သူတစ်ဦးခန့်မှန်းသို့အီးမေးလ်သစ်လုံးသုံးစွဲဖို့တစ်လမ်းလိုအပ်ပြောင်းလဲဘယ်လိုလေ့လာချင်တယ်။ ယခင်က (ပုဒ်မ 2.3.2.1) တွင်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းလူမှုရေးသုတေသနအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေရာတွေကို အသုံးပြု. အခါ, သီအိုရီဆောက်လုပ်ရေးမည့်ဒီလိုမျိုးကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံး၌, Kossinets နှင့် Watts အီးမေးလ်များ (\_ (ဈ \_) \_ (ည \_) မေးလ်ပို့ပေးနှင့် \_ (ည \_) (\_ မေးလ်ပို့ပေးလျှင်လူနှစ်ဦးအချိန် \_ (t ကို \_) မှာချိတ်ဆက်စဉ်းစားခဲ့ကြကြောင်းနှင့်သူတို့ဖလှယ်ခဲ့မှသာလျှင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ကိုယ့်ယခင်ရက် 60 အတွင်း)) \_ ။ ဤရွေ့ကားရွေးချယ်မှုမတရားမရှိသည် ဖြစ်. , သူတို့ကဒီပင်ကိုယ်မူလ setting ကိုဂရုစိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအပေါ်အခြေခံပြီးနှင့် Kossinets နှင့် Watts ၎င်းတို့၏ရလဒ်များကိုသည်ဤရွေးချယ်မှုမှကြံ့ခိုင်ခဲ့ကြကြောင်းအမှန်ခြစ်ခဲ့ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်, သင်တို့၏မည့်ရက်ပေါင်း 60 အစားသင့်ရဲ့ရလဒ်တွေကိုဤရှေးခယျြဖို့အထိခိုက်မခံမဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်အကောင်းတစ်စိတ်ကူးသည်ရက်ပေါင်း 30 သို့မဟုတ် 90 ကရက်ပတ်လုံး-အချို့တိကျသော-ပွောဆို cutoffs ရွေးချယ်ရာတွင်ပါဝငျပတျသကျလြှငျ။
1): Kossinets နှင့် Watts (ဥပမာ, လူဦးရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ပျောက်ဆုံး, shared လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပျောက်ဆုံးနှင့်သီအိုရီ Construction ပျောက်ဆုံးနေတဲ့) မပြည့်စုံသဖြင့်စေသောပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီးတာနဲ့သူတို့ကွန်ယက်ကိုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မောင်းထုတ်နိုငျသောသုံးအဓိကအင်အားစုများနားလည်သဘောပေါက်ရန်သူတို့ကို enabled က data တွေကိုခဲ့ ရှိပြီးသားဆက်ဆံရေးကို 2) shared လှုပ်ရှားမှုများ (ဥပမာ, အိပ်ဆောင်, သင်တန်းတွေ) နှင့် 3) သူရဲ့လူဦးရေ၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ အစောပိုင်းသုတေသနပြုချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီသူတို့အလားတူသူရဲ့လူဦးရေနှင့်အတူလူဆက်ဆံရေးကိုဖွဲ့စည်းဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်အစောပိုင်းလေ့လာမှုများမတူဘဲသူတို့ကဒီပုံစံပြင်းပြင်းထန်ထန်တည်ဆဲကွန်ယက်ကိုတည်ဆောက်ပုံနှင့် shared လှုပ်ရှားမှုများအားဖြင့်လျော့ပါးခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်နည်းဆိုရသော်အစောပိုငျးကသုတေသီတွေကမြင်ခဲ့ပြီးသောပုံစံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစောပိုင်းကသုတေသီများရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကြောင်းဒေတာများကရှင်းပြခဲ့သည်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အောင်မြင်စွာသူတို့ရဲ့အချက်အလက်များ၏မပြည့်စုံနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းအသုံးပြုပုံ Kossinets နှင့် Watts လူမှုရေးကွန်ယက်ကို Evolution မောင်းကမတူညီတဲ့အချက်တွေအမျိုးမျိုး၏အပြန်အလှန်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကြတယ်။